1.အောက်ဆိုဒ်: silicon monoxide ပစ်မှတ်, SiO ပစ်မှတ်, ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, SiO2 ပစ်မှတ်, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, TiO2 ပစ်မှတ်, zirconium ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, ZrO2 ပစ်မှတ်, hafnium ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, HfO2 ပစ်မှတ် , တိုက်တေနီယမ်မိုနောက်ဆိုဒ်ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, TiO ပစ်မှတ်, titanium pentoxide ပစ်မှတ်, Ti3O5 ပစ်မှတ်, niobium pentoxide ပစ်မှတ်, Nb2O5 ပစ်မှတ်, tantalum pentoxide, Ta2O5 ပစ်မှတ်, yttrium အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, Y2O3 ပစ်မှတ် High-purity oxide coating ပစ္စည်းများ.
2.Fluoride: neodymium fluoride ပစ်မှတ်, NbF3 ပစ်မှတ်, barium fluoride ပစ်မှတ်, BaF2 ပစ်မှတ်, cerium fluoride ပစ်မှတ်, CeF3 ပစ်မှတ်, magnesium fluoride ပစ်မှတ်, MgF2 ပစ်မှတ်, lanthanum fluoride ပစ်မှတ်, LaF3 ပစ်မှတ်များ, yttrium fluoride ပစ်မှတ်, YF3 ပစ်မှတ်များ, ytterbium fluoride ပစ်မှတ်, YbF3 ပစ်မှတ်များ, erbium fluoride ပစ်မှတ်, ErF3 ပစ်မှတ်များနှင့်အခြားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဖလိုရိုက်ဓာတ်များ.
3. အခြားဒြပ်ပေါင်းများ: zinc sulfide ပစ်မှတ်, ZnS ပစ်မှတ်, zinc selenide ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, ZnSe ပစ်မှတ်, titanium nitride ပစ်မှတ်, TiN ပစ်မှတ်, ဆီလီကွန် carbide ပစ်မှတ်, SiC ပစ်မှတ်, lanthanum titanate ပစ်မှတ်, LaTiO3 ပစ်မှတ် , Barium titanate ပစ်မှတ်, BaTiO3 ပစ်မှတ်, strontium titanate ပစ်မှတ်, SrTiO3 ပစ်မှတ်, praseodymium titanate ပစ်မှတ်, PrTiO3 ပစ်မှတ်, cadmium sulfide ပစ်မှတ်, CdS ပစ်မှတ်နှင့်အခြားလေဟာနယ်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ.
4. သတ္တုအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ: သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ်ပစ်မှတ်, အယ်လ်ပစ်မှတ်, high-purity copper ပစ်မှတ်, ပစ်မှတ်ထားသည်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်ပစ်မှတ်, ပြေတီ ဦး ရည်မှန်းသည်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောဆီလီကွန်ပစ်မှတ်, စည်ရည်မှန်း, သန့်ရှင်းမှုမြင့်မားသောရွှေရည်မှန်းချက်, Au ပစ်မှတ်ပစ္စည်း, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောငွေရောင်ပစ်မှတ်, Ag ပစ်မှတ်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသော indium ပစ်မှတ်, ပစ်မှတ်၌, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ပစ်မှတ်, မောင်မောင်ပစ်မှတ်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောဇင့်ပစ်မှတ်, Zn ပစ်မှတ်, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမြင့်မားသောပလက်တီနမ်ပစ်မှတ်, Pt ပစ်မှတ်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသော Germanium ပစ်မှတ်, Ge ပစ်မှတ်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောနီကယ်ပစ်မှတ်, ဒေါ်ပန်းတိုင်, သန့်ရှင်းမှုမြင့်မားသောရွှေရည်မှန်းချက်, Au ပစ်မှတ်, gold-germanium alloy ပစ်မှတ်, AuGe ပစ်မှတ်, ရွှေ-နီကယ်အလွိုင်းပစ်မှတ်, AuNi ပစ်မှတ်, nickel-chromium alloy ပစ်မှတ်, NiCr ပစ်မှတ်, တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်, TiAl ပစ်မှတ်, copper indium gallium alloy ပစ်မှတ်, CuInGa ပစ်မှတ်, copper indium gallium selenide alloy ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, CuInGaSe ပစ်မှတ်, သွပ်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်, ZnAl ပစ်မှတ်, လူမီနီယံဆီလီကွန်အလွိုင်းပစ်မှတ်ပစ္စည်း, AlSi ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနှင့်အခြားသတ္တုအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ.
အကြို: sputtering ပစ်မှတ် detitanium agent ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြပါ